AKHRISO: DF Somaliya oo shuruudo ku xirtay dadka soo galaya dalka | HalQaran.com
Home Warar Cusub AKHRISO: DF Somaliya oo shuruudo ku xirtay dadka soo galaya dalka
AKHRISO: DF Somaliya oo shuruudo ku xirtay dadka soo galaya dalka
Muqdisho (Halqaran.com) – Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda ee Soomaaliya ayaa shuruudo kusoo rogtay dadka soo galay dalka ee ka imanaya dibedda, kadib markii dowladda ay shaacisay in dib loo furay duulimaadyada caalamiga ah.
Golaha Wasiirrada Soomaaliya ayaa 30-kii July sheegay in in dib loo furayo duulimaadyada caalamiga ah laga billaabo 3-da bisha August oo ku beegan maalinta berri oo isniin ah.
War qoraal ah oo ay soo saartay hay’adda socdaalka ayey ku sheegtay in dadka dalka soo galaya laga doonayo inay haystaan shahaado caafimaad oo muujineysa inay iska baareen cudurka COVID-19 oo laga waayey.
“Socdaale kasta oo dalka soo galaya waxaa laga doonayaa in uu haysto shahaadada caddeyneysa in uusan qabin caabuqa COVID-19 uuna qaatey ugu badnaan 72 saacadood ka hor safarka (COVID-19 negative Certificate), sida ay fareyso siyaasadda ka hortagga Caabuqa Karoonaha ee dalka,” ayaa lagu yiri qoraal ay hay’adda soo dhigtay barteeda facebook.
Si kastaba, go’aankan ayaan saameyneyn oo kaliya dadka dalka kasoo galaya dhanka hawada, balse sidoo kale wuxuu saameynaya dadka kasoo galaya dhanka dhulka iyo badda.
Halka hoose ka akhriso Qoraalka Hay’adda Socdaalka:
Shuruudo lagu xiray dadka soo galaya dalka